निरोगी र तन्दुरुस्ती जीवन कसरी पाउने ? – सत्य तथ्य र निष्पक्ष्य समाचारको लागि
हरेक व्यक्तिलाई स्वस्थ जीवन मनपर्छ । हरेक व्यक्ति सधैंभरी स्वस्थ रहन चाहन्छ । स्वस्थ रहनका लागि मानिसले हरेक प्रकारका मेहनतहरु पनि गरिरहेको हुन्छ । यति गर्दा पनि गर्दै पनि हामी कहिलेकाहीँ अस्वस्थ हुन्छौं, बिरामी पर्छौं । यद्यपि, हामीले केही साना–साना कुराहरुमा ध्यान दिन सक्यौं भने आफूलाई सकेसम्म स्वस्थ राख्न सफल हुनेछौं । आफूलाई स्वस्थ राख्न गरिने केही प्रयासहरु यस्ता छन् ः
हामी प्रायः बिरामी परेपछि मात्र अस्पताल जान्छौं अथवा डाक्टरलाई भेट्छौं । वास्तवमा आफूलाई स्वस्थ राख्नका लागि बिरामी नै नभए बेला–बेलामा आफ्नो शरीरको परीक्षण गराइ रहनुपर्छ । हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुनुअघि नै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ ।
हानिकारक छ धूम्रपान
भनाइ नै छ नि ‘धूम्रपानको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ ।’ यो कुरा थाहा हुँदा–हुँदै पनि कतिपय व्यक्तिहरु ढुक्कले धूम्रपान गरिरहेका हुन्छन् । वास्तवमा धूम्रपानले धेरै प्रकारका रोगहरु निम्त्याउँछ । धूम्रपानका कारण ब्लड प्रेसर बढ्छ । यसले व्यायाम गर्ने क्षमता घट्छ र शरीरमा रगत जम्ने जोखिम वृद्धि हुन्छ । धूम्रपान छोड्दा आयु बढ्छ, स्वास्थ्यमा सुधार आउँछ । यसबाट आकर्षक देखिन सकिन्छ भने धूम्रपानका कारण मुहारको रिङ्कल बढ्छ । दाँतमा दाग पर्छ, फोक्सो प्रभावित हुन्छ, औंला पहेँला हुन्छन् । अनि छालाको रंग पनि परिवर्तन हुन्छ । त्यस्तै धूम्रपान त्याग गर्दा इन्द्रियहरू सक्रिय मात्र हुँदैनन्, तपाईंको पैसा पनि बचत हुन्छ ।
धूम्रपान जस्तै मद्यपान पनि शरीरका लागि हानिकारक हुन्छ । मद्यपान सेवन गर्दा कलेजो, फोक्सो तथा मुटुमा क्षति पुग्छ । यसले काम गर्ने क्षमतामा प्रभाव पार्छ । तौल बढ्छ र हृदयाघातको खतरा पनि बढाउँछ ।
यदि तपाईंलाई तनाव बढेको महसुस भयो अथवा निद्रा गडबड भयो भने तुरुन्त डाक्टरकहाँ गएर परीक्षण गराउनु पर्छ ।
अत्यधिक तरल पदार्थको सेवन
पानी शरीरको प्रमुख तत्व हो । हाम्रो शरीरको तौलको ६० प्रतिशत अंश पानी हुन्छ । शरीरका हरेक प्रणालीलाई पानीको आवश्यकता हुन्छ । औषत् एकजना बयस्क व्यक्तिलाई दैनिक कम्तीमा १ दशमलव ५ देखि २ लिटर पानी चाहिन्छ । पानीले शरीरको छाला कोमल बनाउनुका साथै पाचनतन्त्र ठिक राख्छ ।
खानामा नुनको मात्रा
अचार, पापड, सुप तथा तरकारीमा नुनको प्रयोग कम गर्नुपर्छ । स्वस्थ शरीरका लागि हरेक दिन ५ ग्रामभन्दा कम नुन खानु उपयुक्त मानिन्छ । ताजा तरकारी, फलफूल, माछा, पोल्ट्री उत्पादन तथा ननभेज खाना खानुपर्छ ।
तपाईंको शरीर जति मोटो भयो, तपाईं अस्वस्थ हुने सम्भावना त्यत्ति नै बढी हुन्छ । अतिरिक्त तौलका कारण पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम बढ्छ र हृदय रोग तथा मधुमेहजस्ता रोग लाग्ने सम्भावना बढ्छ । यदि तौल सामान्यभन्दा बढी छ भने खानपानमा बिस्तारै परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । आफ्नो शारीरिक सक्रियता बढाउनुपर्छ । यदि एकैदिनमा एक–डेढ किलो तौल बढेको छ र सातामा एक–दुई किलो बढ्दैछ भने कुनै फिटनेस ट्रेनरसित सल्लाह गरी काम गर्नुपर्छ ।
ब्लड प्रेसर तथा कोलेस्ट्रोलको नियमित परीक्षण गराउनुपर्छ । उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिमा सधैं स्ट्रोक अथवा हृदयाघात हुने खतरा हुन्छ । सकेसम्म हरेक दिन ब्लड प्रेसर जाँच गराउनुपर्छ र थोरै पनि परिवर्तन देखियो भने डाक्टरसँग सल्लाह लिनुपर्छ । रक्तचाप कम हुँदा हृदयमा दबाब कम हुन्छ ।
व्यायाम गर्दा शरीरमा शक्ति बढ्छ । शरीरका मांसपेशी पनि मजबुत हुन्छन् । त्यसैले बिस्तारै–बिस्तारै व्यायाम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । जसले शारीरिक क्षमता स्वतः विकसित हुन्छ । शारीरिक व्यायामका लागि अलग–अलग प्रकारको एरोविक्स, पौडी, साइक्लिङ आदि गर्न सकिन्छ ।sorce
Previous फेसबुकका मालिक मार्क जुकरबर्ग कसरी परिवारसँग रमाउँछन् ?
Next बौद्ध दर्शन : सधैं खुशी हुने ८ मार्ग